ဘ၀ကိုပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးစွာဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ဒီစကားလေးတွေပြောတာကိုရှောင်ဖို့လို… – Trend.com.mm
Posted on February 22, 2018 November 13, 2018 by Noel
ကိုယ်တွေရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေမှာ အစွမ်းတွေရှိပါတယ်တဲ့။စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေဆိုတာ အတွင်းစိတ်ရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ဘ၀ရဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်ကို လည်းသက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်။အတွေးတွေ၊ စိတ်ကူးတွေရှိလို့သာလက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်လား?
ဥပမာ ကော်ဖီသောက်မယ်လို့တွေးထားပြီးရင် ကော်ဖီထဖျော်တာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုပဲ ညဘက်မိတ်ကပ်တွေ ဖျက်ဖို့ကိုပျင်းပြီးမဖျက်တော့ဘူးလို့တွေးမိရင် တကယ်လည်းထပြီး မဖျက်မိတော့ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေက အပြုအမူတွေပေါ်သက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်။သင့်ရဲ့ အတွေးတွေကမကောင်းရင် အပြုအမူကလည်းမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေ ကတော့ ဘ၀ကိုအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သင်တို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့အတွေးတွေ၊စိတ်ကူးတွေကိုထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
လေ့လာချက်တွေအရ ကိုယ်တွေနေ့တိုင်းပြောနေမိတတ်တဲ့စကားတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတွေးတောင်မတွေးမိပဲနဲ့ပါးစပ်ကနေ နေ့တိုင်းနီးပါးလိုလိုထုတ်ပြောမိတဲ့စကားတွေပါ။ အများဆုံးသုံးလေ့ရှိတဲ့စကားစုလေးတွေဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီစကားတွေကသင့်ဘ၀အတွက် ဘာမှအကျိုးမရှိစေတဲ့စကားတွေ၊ အဆိုးဖြစ်စေတဲ့စကားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် အခုပြောပြမယ့်စကားစုလေးတွေက သင်အမြဲတမ်းပြောနေကျဆိုရင် ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ အဲ့လိုပြောနေတာတွေကိုရပ်တန့်ပစ်လိုက်ပါတော့။
(ဒီစကားက သင့်ကိုလည်းအားငယ်ဝမ်းနည်းစိတ်တွေဖြစ်စေပြီး တခြားတစ်ဖက်ကိုလဲ အပြစ်ရှိသလိုခံစားသွားရစေပါတယ်။အပြောနဲ့မဟုတ်ပဲ အပြုအမူနဲ့ပြန်ပြင်ဆင်ပါ)
(တောင်းပန်ဖို့လိုတဲ့အရာအတွက်ပဲတောင်းပန်ပါ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ပြောနေတာက တစ်ခါတစ်လေ ရွဲ့နေသလိုဖြစ်တတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အသုံးမကျဘူးလို့ခံစားမိစေပါတယ်)
(အချိန်ပေးချင်တဲ့သူအတွက် အချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်။အချိန်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာက သူများအတွက်လည်းကြားရတာမကောင်းသလို ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ဖိစီးမှုများလာတတ်ပါတယ်)
(ဒီစကားက တစ်ဖက်လူအတွက် အပြစ်ရှိသလို၊အပြစ်မကင်းသလိုခံစားရစေပြီး သင့်အတွက်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုများလာစေပါတယ်)
(ဒီလိုစကားမျိုးပြောတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိမ်ငယ်စေပြီး အသုံးမကျသလို၊အသုံးမ၀င်သလို ခံစားရစေပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြစ်တင်အားငယ်နေမယ့်အစား လက်တွေ့ဘာလို့ဒီအရာက ငါ့အတွက်မဖြစ်နိုင်တာလဲစဉ်းစားပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်)
(ချစ်သူစုံတွဲတွေတော်တော်များများပြောလေ့ရှိပါတယ်။ဒီစကားက တစ်ဖက်လူက သူဟာ သင့်အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတယ်လို့မာန်တက်သွားပြီး သူလုပ်ချင်တာပဲလုပ်နေတော့ မှာပါ။သူဘာလုပ်လုပ် သင်ကသူမရှိရင်မနေနိုင်ဘူးပြောထားတဲ့အတွက် အမြဲအလျော့ပေး နားလည်နေရတော့မှာ မဟုတ်လား။ဒါဆို ရေရှည်ကျရင် သင့်စိတ်မှာလည်းဖိအားတွေ များလာတော့မှာပါ)
(တစ်ချို့သူတွေက အဆင်မပြေပေမဲ့လည်း တစ်ခြားသူတွေစိတ်မကောင်းမဖြစ်အောင် ငါအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပဲ အဆင်မပြေရင်မပြေတဲ့အကြောင်း ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုပြောပြပါ။တကယ်အဆင်ပြေလို့ပြေတယ်ပြောတာက ကိစ္စမရှိပေမဲ့ အဆင်မပြေပဲနဲ့ပြေတယ်လို့ပြောတာက သင့်အတွက်လုံးဝအကျိုးမရှိမကောင်းစေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ)
ကိုယျတှရေဲ့ စိတျကူးစိတျသနျးတှမှော အစှမျးတှရှေိပါတယျတဲ့။စိတျကူးစိတျသနျးတှဆေိုတာ အတှငျးစိတျရဲ့ နကျရှိုငျးတဲ့နရောတဈခုမှာတညျရှိနတောဖွဈပွီး ဘဝရဲ့ နစေ့ဉျ လုပျဆောငျမှုတှအေပျေါကို လညျးသကျရောကျမှုရှိစပေါတယျ။အတှေးတှေ၊ စိတျကူးတှရှေိလို့သာလကျတှလေု့ပျဆောငျမှုဆိုတာဖွဈလာတာမဟုတျလား?
ဥပမာ ကျောဖီသောကျမယျလို့တှေးထားပွီးရငျ ကျောဖီထဖြျောတာမြိုးပေါ့။အဲ့လိုပဲ ညဘကျမိတျကပျတှေ ဖကျြဖို့ကိုပငျြးပွီးမဖကျြတော့ဘူးလို့တှေးမိရငျ တကယျလညျးထပွီး မဖကျြမိတော့ပါဘူး။အဲ့လိုမြိုးအတှေးတှကေ အပွုအမူတှပေျေါသကျရောကျမှုရှိစပေါတယျ။သငျ့ရဲ့ အတှေးတှကေမကောငျးရငျ အပွုအမူကလညျးမကောငျးနိုငျပါဘူး။ကောငျးတဲ့အတှေးအချေါတှေ ကတော့ ဘဝကိုအောငျမွငျတဲ့လမျးကွောငျးကိုချေါသှားပါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့သငျတို့ရဲ့ မကောငျးတဲ့အတှေးတှေ၊စိတျကူးတှကေိုထိနျးခြုပျကိုငျတှယျဖို့တော့လိုပါတယျ။
လလေ့ာခကျြတှအေရ ကိုယျတှနေတေို့ငျးပွောနမေိတတျတဲ့စကားတှရှေိပါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေတှေးတောငျမတှေးမိပဲနဲ့ပါးစပျကနေ နတေို့ငျးနီးပါးလိုလိုထုတျပွောမိတဲ့စကားတှပေါ။ အမြားဆုံးသုံးလရှေိ့တဲ့စကားစုလေးတှဖွေဈပွီး အဲ့ဒီစကားတှကေသငျ့ဘဝအတှကျ ဘာမှအကြိုးမရှိစတေဲ့စကားတှေ၊ အဆိုးဖွဈစတေဲ့စကားတှလေညျးဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ အခုပွောပွမယျ့စကားစုလေးတှကေ သငျအမွဲတမျးပွောနကေဆြိုရငျ ဒီစာလေးကိုဖတျပွီးတာနဲ့ အဲ့လိုပွောနတောတှကေိုရပျတနျ့ပဈလိုကျပါတော့။
(ဒီစကားက သငျ့ကိုလညျးအားငယျဝမျးနညျးစိတျတှဖွေဈစပွေီး တခွားတဈဖကျကိုလဲ အပွဈရှိသလိုခံစားသှားရစပေါတယျ။အပွောနဲ့မဟုတျပဲ အပွုအမူနဲ့ပွနျပွငျဆငျပါ)
(တောငျးပနျဖို့လိုတဲ့အရာအတှကျပဲတောငျးပနျပါ မလိုအပျတဲ့အရာတှအေတှကျ တောငျးပနျပါတယျပွောနတောက တဈခါတဈလေ ရှဲ့နသေလိုဖွဈတတျပွီးကိုယျ့ကိုယျကိုယျလညျး အသုံးမကဘြူးလို့ခံစားမိစပေါတယျ)
(အခြိနျပေးခငျြတဲ့သူအတှကျ အခြိနျဆိုတာရှိပါတယျ။အခြိနျမရှိဘူးလို့ပွောလိုကျတာက သူမြားအတှကျလညျးကွားရတာမကောငျးသလို ကိုယျကိုယျကိုယျတိုငျလညျး စိတျဖိစီးမှုမြားလာတတျပါတယျ)
(ဒီစကားက တဈဖကျလူအတှကျ အပွဈရှိသလို၊အပွဈမကငျးသလိုခံစားရစပွေီး သငျ့အတှကျလညျးစိတျဖိစီးမှုမြားလာစပေါတယျ)
(ဒီလိုစကားမြိုးပွောတာက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသိမျငယျစပွေီး အသုံးမကသြလို၊အသုံးမဝငျသလို ခံစားရစပေါတယျ။ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအပွဈတငျအားငယျနမေယျ့အစား လကျတှဘေ့ာလို့ဒီအရာက ငါ့အတှကျမဖွဈနိုငျတာလဲစဉျးစားပွီး ကိုယျ့စိတျကိုပွငျဆငျဖို့လိုပါတယျ)
(ခဈြသူစုံတှဲတှတေျောတျောမြားမြားပွောလရှေိ့ပါတယျ။ဒီစကားက တဈဖကျလူက သူဟာ သငျ့အတှကျမရှိမဖွဈအရေးကွီးတယျလို့မာနျတကျသှားပွီး သူလုပျခငျြတာပဲလုပျနတေော့ မှာပါ။သူဘာလုပျလုပျ သငျကသူမရှိရငျမနနေိုငျဘူးပွောထားတဲ့အတှကျ အမွဲအလြော့ပေး နားလညျနရေတော့မှာ မဟုတျလား။ဒါဆို ရရှေညျကရြငျ သငျ့စိတျမှာလညျးဖိအားတှေ မြားလာတော့မှာပါ)
(တဈခြို့သူတှကေ အဆငျမပွပေမေဲ့လညျး တဈခွားသူတှစေိတျမကောငျးမဖွဈအောငျ ငါအဆငျပွပေါတယျလို့ပွောလရှေိ့ပါတယျ။အဲ့ဒီလိုမလုပျပဲ အဆငျမပွရေငျမပွတေဲ့အကွောငျး ရငျးနှီးတဲ့သူတှကေိုပွောပွပါ။တကယျအဆငျပွလေို့ပွတေယျပွောတာက ကိစ်စမရှိပမေဲ့ အဆငျမပွပေဲနဲ့ပွတေယျလို့ပွောတာက သငျ့အတှကျလုံးဝအကြိုးမရှိမကောငျးစတေဲ့ ကိစ်စတဈခုပါပဲ)